Breaking News Gorsa Addaa:Gotichi Oromoo Hayyuun Siyaasaafi Hogganaan KFO OFC Dr Mararaa Guddinaa Murna Siyaasaa Dhiyeenya Biyya seene ODF’f – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking News Gorsa Addaa:Gotichi Oromoo Hayyuun Siyaasaafi Hogganaan KFO OFC Dr Mararaa Guddinaa Murna Siyaasaa Dhiyeenya Biyya seene ODF’f
#Breaking_News #Gorsa_Addaa: Gotichi Oromoo Hayyuun Siyaasaafi Hogganaan KFO_OFC Dr #Mararaa_Guddinaa Murna Siyaasaa Dhiyeenya Biyya seene #ODF‘f gorsa addaa kennan kana caqasaa; waliifis daddabarsa!!
” 1ffaa Dhaaba Oromoo isa tokko gananii ykn diiganii isa tokko waliin tarkaanfachuun ni ulfaata, dhaaba asiin fuldura keessa turtan waliin herreega siyaasaa walirraa buuftanittuu? Kanaaf dura dhaaba keessa turtaniifi qaama waliin marii’attanii dhuftan waliin dhaqaa araarama malee utuu rakkoo kanaan jirtanii nuti illee isin waliin haasawaa biraa keessa seenuu hin dandeenyu, sababaa keessaniinis uummata Oromoo dhagaa ofitti darbachiisu hin barbaadnu.
“2ffaa Siyaasni yoo itti siqan abidda nama guba, yoo irraa siqan namatti qorra kana immoo ni beektu. Egaa amma biyya seenuun keessan akka hubannuutti marii mootummaatiin biyya seentan yoo mootummaa waliin jiraachuu murteessitan Uummatni Oromoo dhagaa isinitti darbuu hin dhiisu yoo akkuma keenyaatti qabsaa’uuf murteeffattan immoo mootummaan kun dhagaa isinitti darbuu hin dhiisu isa kanaaf murtoon kan keessan ta’uyyuu haalli itti adeemuu barbaaddan uummataafis nuufis ifaa miti. Akkan ilaalutti qormaata keessa jirtu” jechuun nagaan gorsa gabaabduu ergaa guddaa qabduufi ijibbbachiftuu kanaan of irraa gaggeessaniru.
Ethiopia: Mudslide killed 23 in West Arsi and Sidama Zones, after hours of heavy rain